နော်….. လိမ္မာပါတယ် ဗမာမလေး စိတ်မညိုနဲ့ – Sakura | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » နော်….. လိမ္မာပါတယ် ဗမာမလေး စိတ်မညိုနဲ့ – Sakura	25
နော်….. လိမ္မာပါတယ် ဗမာမလေး စိတ်မညိုနဲ့ – Sakura
Posted by ဇီဇီ on Mar 21, 2016 in Creative Writing, Home & Garden, My Dear Diary, Photography, Society & Lifestyle | 25 comments
ရွှေညာမြေက ပိတောက်ဝါကို သတိရတဲ့အခါ ချယ်ရီကိုသာပန်ပါ ကျေနပ်ကွယ်~~~~~~~
ရဲရဲတင်းတင်း ချယ်ရီပန်းလို့ပဲ သုံးနှုန်းလိုက်ပါတယ် ပိတ်သတ်ကြီးး
ဖြစ်ပုံက Gardens by the Bay မှာ ချယ်ရီပန်းတွေ (သူတို့ အခေါ် ဆာကူရ) ပြပွဲရှိတယ် ဆိုလို့ သွားရာက ဟိုရောက်တော့မှ ချယ်ရီပန်းဆိုတာ အမျိုးစုံပါပဲလား အံ့ဩခဲ့ရတာပါ။
တစ်ချို့က ချယ်ရီမဟုတ် မက်မုံပွင့် လို့လည်း ပြောရဲ့။
အဲဒါနဲ့ ဓာတ်ပုံကိုလည်း ဒီ တိုင်းမတင်ရဲပဲ ဆရာဂီကို အရင်လှမ်းမေးး၊ ရှာဖတ် ရှာကြည့်တော့မှ ဂလိုတွေ့ပါတယ်။
ဂျပန်မှာတော့ အဓိက ၃ မျိုးခွဲပါတယ်။
မက်မုံသီး (Peach) (တညားကတော့ စွန်းဝူခုန်း ခူးစားခိုးစားတဲ့ အသီးလို့မှတ်ထားတာပဲ)
မက်မန်း (Plum) (အဲဒါက အချဉ်ပေါင်းလုပ်တဲ့အသီး)
တရုတ် ဇီးမက်မွန်သီး (Apricot) (ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းမသိဘူး)
မျိုးရင်းတူ မျိုးစိတ်ကွဲတွေပါတဲ့။ အဲဒီတော့ ပန်းလေးတွေက ဆင်ပြီပေါ့။ အရိုးရင့်ရင့်ကနေ ပန်းတွေ အများကြီး ပွင့်တဲ့ အချိန်များဆို အရွက်ဆိုတာ မမြင်ရသလောက်။
မက်မွန် က အအေးဆုံးအချိန်ပွင့်ပြီး စိနပြည်ရဲ့ တံဆိပ်
အပြင်းဆုံးရာသီဥတု ကို အံတုတဲ့သဘော ပါ တဲ့ …!!
စစ်တုန်းက Propaganda တပင်လုံးပွင့် တပင်လုံးကြွေသလို
တတပ်လုံးသေတဲ့အထိ တိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ် ကိုပြောချင်တာ ပါတဲ့ …!!!
(ဆရာဂီ ပြောပြတာလေး ပါ သိမ်းထားပါရစေ)
ပြောလက်စနဲ့ အတင်းလေး ဆက်ပြောရရင်…
မိုးးကုတ် မန်းလေးး လမ်းးဘေးးက ချယ်ရီတောကို ၂၀၀၆ မှာ မီးးရှို့တာ ကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရသူဘာာာ
ကြက်ဆူ စိုက်မို့တဲ့ အရပ်ကတို့… ဗျဲ…
ပင်းတယ သွားတဲ့ လမ်းဘေးက မက်မွန်တောဟာကလည်း ခုဆို လွင်ပြင်ကြီးဖြစ်နေသတဲ့။
မေမြို့က ကန်တော်ကြီးမှာ ချယ်ရီ ခြောက်ခြောက်လေး ၂ ပင်ကိုလည်း ဓာတ်ပုံမရိုက်ရက်လို့ မရိုက်ခဲ့။ မေမြို့မယ်တော့ ဘယ်လောက်ကျန်အူးမလည်းမသိပါဘူးး။
ဘာလို့ သတိထားမိတုန်းဆို မွေးမေ့လေ့ ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပန်းက ချယ်ရီပန်းပါ။
ကိုင်းအရိုးရင့်ရင့်နဲ့ အပွင့်နုနုတွဲစပ်ထားပုံကို ချစ်တယ်ပြောဖူးလို့ပါ။
ကိုယ်သွားတဲ့နေ့က စလုံးရောက်နေတဲ့ ဂျပန်တွေလည်း အများကြီးလာကြပါတယ်။
ရိုးရာ ဝတ်စုံတွေနဲ့ သူတို့ ဆာကူယာ ကို အလွမ်းပြေလာကြည့်တယ်ထင်ပါရဲ့။
ကျနော်တောင် ချယ်ရီများများရိုက်ချင်စိတ်ရယ် ဂျပန်မသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါရယ်မို့ ပျော်ပျော်ကြီး ပိုက်ဆံပေးသွားရပါတယ် ။ ဂစ်။
ကိုယ်တို့ရဲ့ နွေဦးကံ့ကော်တွေ ကိုလည်း နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုလာမဲ့ အချိန်ကို စောင့်ရင်းးး…
ဒါနဲ့ တဂျီး ပြောပြောနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုပန်း သိရပလား???
kai says: ဂျပန်မှာ စားသောက်ဆိုင်အလုပ်လုပ်တုံးက.. . နွေရောက်ရင်.. မုံလာဥနဲ့.. အူမဲပန်းပွင့်လေးတွေ. ပုံဖေါ်.. ဆုရှိပွဲပြင်တာမှာ.. ထုတ်သုံးရတာသတိရမိတယ်..။
သူတို့က… ပါးစပ်နဲ့မစားခင်.. မျက်စိနဲ့.. စားတာကိုး..။ ဆိုတော့…
မြန်မာတွေရဲ့ နိုင်ငံတော်ပန်းကတော့.. ဘာမှန်းသိဦးမှာမဟုတ်…။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရေး..။ ချမ်းသာရေးမလုပ်နိုင်သေး…။
ဘာသာရေး.. နိုင်ငံရေး.. အမျိုး၊ဘာသာ တို့နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်လေ…။
ဟေလာယောက်ျား.. ပိတောက်သား… တဲ့…။
ပိတောက်ဆို… ပိတောက်.. တယောက်ဆိုတယောက်… တဲ့..။
ရွှေဝါရောင်ဖြစ်ပါ့.။ ရွှေနဲ့မြ… ပိတောက်နဲ့.. သစ်ရွက်စိမ်းလိုက်ပါ့…။
အနံ့မွေးပါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: အမှန်တော့ ရာဇဝင်ရှိပန်းတွေ အများကြီးပါနော့..!!
ပိတောက် ကတော့ နှစ်ကူးပန်းအနေနဲ့ ရှိထားပြီးသားးဆိုတော့.. ပွဲတော် ထိ လုပ်လို့ ရတဲ့ ပန်းး ဘာ ပန်းး ရှိလည်းး မသိ ကိုယ်တို့ အမေကလည်းး ပန်းးဆိုအမျိုးစုံ ပန်တာ နော်..!!
မြစပဲရိုး says: နိုင်ငံတော်ပန်း စိန်ပန်း ပါဆို။ (အထိမ်းအမှတ်နဲ့) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: အပြာလားးး
မြစပဲရိုး says: အနီ :-)))
manawphyulay says: တဂျီးက ပိတောက်ဆို ပိတောက် တစ်ခိုင်လုံးလား…. ? :P
Ma Ei says: ချယ်ရီ ချစ်တယ်
မေမြို့က တစ်ပင်နှစ်ပင်ပွင့်တာလေး အပြေးလွှားသွားကြည့်ရတာ အားမရဘူးအေ
ပြီးတော့ အပင်က ခြေါက်ကပ်ကပ်လေးရယ်။
ဘယ်သူကမြန်း ချယ်ရီပင်ကို အားစိုက်ပြီး စိုက်ပျိုးချင်မလဲမသိဘူးနော်။
kai says: စိုက်လေ….။
လူများများပါချင်ရင်.. ကင်န်ပိန်းလုပ်ပြီး …လူတွေစည်းရုံးပေါ့…။
မြန်မာ့ဂဇက်အနေနဲ့.. တပိုင်းတစိတ်ဝင်ပါမယ်လေ….။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3276
pooch says: ဆာကူရာမြင်လို့ပါ ဆိုင်သလိုလို မဆိုင်သလိုလို ပုံပြင်တပုဒ်ရှိဘူးတယ် ဒီရက်အားနေတယ်ဆိုတော့ စာရေးအုန်းမှလားလို့ :P
မေမြိူ့မှာတော့ ပွင့်တဲ့အချိန် တခါကြုံဖူးတယ် လှတယ်
ကျိုင်းတုံလွယ်မွေ နှစ်တရာအိမ်တ၀ိုက်လည်း ချယ်ရီပင်ေ်တွ ရှိတယ် ဒီဇင်ဘာဆိုရင်တော့ လှိုင်နေတာပဲတဲ့ ကိုယ်သွားတုန်းကတော့ မတွေ့ခဲ့ရဘူး
လိကျန်းသွားတုန်းကတော့ တွေ့ဖူးတယ် လှလို့
ခင်ဇော် says: စာရေးပါဆို။
မရေးရင် အမုန်းစာရင်းထဲ တို့လိုက်မယ်။
မြန်မာပြည်မယ် ချယ်ရီပင်တွေ ပေါများများကို မိုးကုတ်သွားမှ မြင်ဖူးတယ်။
Foreign Resident says: အဘတို့ အိမ်ဘေးနားလမ်း မှာ ရှိနေတဲ့ အပင်တွေက ၊
အပွင့် ကတော့ ပုံစံတူတယ် ၊ Size က အဲ့လောက်မကြီးဘူး ။
အဖြူ ပင်လည်း ရှိတယ် ။ ပန်းရောင် ပင်လည်း ရှိတယ် ။
သူပြောမှဘဲ ဘာပင်တွေမှန်း မသိ ဖြစ်တွားဘီ ။
ခင်ဇော် says: အသီးသီးမှ ကြည့်လိုက်တော့ လေ အဘရဲ့။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ရယ် မမီတော့ပြီ လှရက်နိုင်သော ပန်း ချယ်ရီ။
ခင်ဇော် says: အမဝင့် ချယ်ရီပန်း ကြိုက်လားး
Thint Aye Yeik says: .မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ပန်းကိုတော့ ကျနော်လည်း ပိတောက်ပဲ ပြေးမြင်တယ်။ (မလေးရှားပိတောက် ဆိုတဲ့ လမ်းဘေးအပင်ကြီးတွေတော့ မဟုတ်။ သင်္ကြင်္န်နားနီး တန်ကူး ကဆုန်မှာ ပွင့်တဲ့ပိတောက်. . .)
ချယ်ရီက ဂျပန်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပန်းလို့ ဆိုရင် ရမလား မမဂျီး
ခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့ ဆက်ဆက်ရယ်။
ချယ်ရီလို့ ဆိုတာနဲ့ ဂျပန်ကိုပြေးမြင်ရအောင်ထိကို သူတို့က စွမ်းတယ်လေ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဘာမှန်းမှလည်းမသိ.. ပန်းလည်းမကြိုက်တတ်…
ဒါမယ့် ဓာတ်ပုံထဲမှာတို့ ပန်းချီထဲမှာတော့ဆို အတော်ကြိုက်တယ်..
ကိုယ်ဟာ virtual world ကိုများ မြတ်နိုးမိနေသလား..
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: မိုက်ဒယ် မလိမ်မာဘူး
ခင်ဇော် says: ဗမာ မလေးး လာဘီ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ပန်းကိုတော့“အောင်သပြေပန်း” လို့ထင်တယ်
ခင်ဇော် says: သပြေပန်းး က အပြ မလှဘူးး မိုက်မိုက်..
Ma Ma says: Wall paper ပြောင်းရပြန်ပေ့ါတခါ။ နိုင်ငံတော်ပန်းကတော့ မလတ်ပြောသလို စိန်ပန်းနီကို သဘောကျတယ်။
ဒါပေမယ့် အမဒုံကတော့ စိန်ပန်းမှာ အပြစ်ပြောစရာတွေ အများကြီးမို့(သူပြောခဲ့ဖူးတာတွေ အများကြီးပဲ၊ မမှတ်မိတော့ဘူး။) နိုင်ငံတော်ပန်း မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike This solution has been deemed correct by the post author
manawphyulay says: တောင်ကြီး သွားတုန်းကတော့ ချယ်ရီပင် သိပ်မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ ချယ်ရီပင်ကို အရမ်းသဘောကျတယ်။ မျက်စိပသာဒ လှတယ်။ အေးတယ်။